Finland: 5 Soomaali ah oo lagu maxkamadaynayo kufsi | Somaliska
Shalay waxaa bilaabatay maxkamadaynta 5 nin oo Soomaali ah oo lagu haysto in ay kufsi u geysteen gabar ka soo degtay tareenka xaafada Mosabacka ee magaalada Helsinki. Bishii maarso ayaa la sheegay in raggaan ay si wada jir ah u kufsadeen gabadha. Haddii lagu helo dambiga lagu eedeeyay raggaan ayay tahay arin ceeb weyn u soo hoynaysa Soomaalida Finland.
Gabdha lagu magacaabo Ujuni Ahmed oo Soomaali ayaa YLE u sheegtay in haddii raggaan ay ku cadaato dambiga, ay muhiimtahay in Soomaalida Finland ay kacaan oo arrintaan ay cambaareeyaan. Waxay sheegtay in ay muhiimtahay in Soomaalidu ay ka wada hadlaan arimaha la xiriira galmada, daroogada iwm isla markaana ay cadeeyaan in kufsiga aan la aqbali akrin.
“Waxaan ku noolnahay Finland 2015, Soomaalidu waa in ay aqbalaan in aanan dib ugu laabanayn dalkii hooyo, waa in aan qaadanaa dhaqanka iyo fikirka Finland. Halkani waa dhulkeena waa in Soomaalidu ay sidaa u noolaadaan oo isku diyaariyaan” ayay tiri Ujuni Ahmed.
Fikradaha gabadhaan ayaa waxaa dhibsaday qaar ka mid ah Soomaalida. Waxay sheegeen in aysan masuul ka ahayn kufsiga ay geystaan koox Soomaali ah.
Si kastaba ha ahaatee, ma ahan markii ugu horeysay ee Soomaali lagu eedeeyay kufsi. Bishii Febraayo ayay ahayd markii aan soo qornay in 8 nin oo Soomaali ah ay doonta Finland iyo Sweden u kala gooshta ay ku kufsadeen haweenay.
Kufsiga waxaa keena in raga iyo dumarka la kala saaro ama lagu soo koriyo inaan lays dhex gelin. Tusaale meelaha dabaasha markay soo galaan nimanka somalidaa naagaha aad ayay u eegaan taasna waxaa keenaysa, koriimada.
Nimanka somalidaa malahan khaladka waxaa iskaleh waa dhaqanka iyo diinta islamka.
Waayo nin Qatan oo aan gabar qaawan arkin inta badan waxa uu noqonayaa horor.
Wiilasha carabtaa iyo wiilasha somalidaa waa isku mid xaga qabsashada.
Khaasatan dadka ka yimaada dunida islamka. Waayo meeshaas ragga iyo dumarka waaa lakala soocan yahay xataa meelaha dabaasha.
Taas ayaa keentey Qabsashada.
Nin baahan waxkasta ayaa ka suurooba.
Xataa caruurta ayuu kuyahay khatar.
Waa fekerkayga aniga.
Asc waa idin salaamay bahda somaliska waxa dhacay aad baan uga xumahay hadey run yihiin. waxaasa ila wanaagsan somaalida qariban wa iney bartaan basar heer galbeedka waxaa ka sheqeeyo basar wax la yiraa somaali 90% waa dad wanaagsan adaab lagu faanane leh lkn 10 soo hartay ow qarabin wa iney bartaan basar teeda kale somaali hadey 10 quf oo xamaatay ceeb uma soo jiidi karto intakale somaali guul insha allah meel walba aad dunida ka joogtan
Cabdi khaalid adiga ilaahey ka cabso waxa noo faaneyso waa heer galbeed ow ragooda is foolan waa dad meeshaas ey ka kaartay xumaanta ogowna aduunka islaam la.aan sheqeymaa waxaad ku hadleyso nin muslima kuma hadlo marka walal sidaa wax u fahamtay ka bedel islaam nooma baahno anaga ayaa u baahan ma fiicno inaa diinta islaamka eedeyso lkn hadaana xishooneyn waxad rabto samey wblhi towfiiq
May 6, 2015 at 23:07
wax walba wey dhici karan balse iga yaabiyey wiilka Cadbi khaalid la dhoho waxa uu soo qoray waa sidaan ee bal ila arka asagana waxan leeyahay walaal dib u eeg waxa ad soo kortay
Cabdi Khalid kan LA baxay waa bahal jaahila oo diintii ilaaHay wax ka sheegaya siduu jaahil u ahaa uunbuu Tahriib Ku yimi galadiib wax balaayo ka dhacduu u haystaa waar orod ashahaado diinta waad ka baxdaye Sidan Muslim kuma tihid’ adiga iyo Waxa noocaaga ah Ee saas u fakaraya ilaahay umada muslimka ah haka dhex qabto iimaankay beeleene.
Ascwrwb all walaalaha salaan sare all runtii hadii ay arintan dhab noqoto waa ceeb umudda soomaaliyeed iyo umada islaamka oo dhan anoo wajahayso subcad xumo mana wanaagsana falkaasi runtii diinteena suubana ma ogala dhaqanka noocaasi ah .talow may guusadaan raga fool xumdaa sameynayaan guur xalaal allaah inoo baneeyey oo waa inaan raacnaa sunnada rasulkeena csw hadi kale wallee maalin baa jirta xisaaab ogaada raga waxaas sameeyayoow xisaab ayaa jirta aduunka ceeb la kulmeysan aakhirana xisaab idiin sugeysaa , Alloow xaqqa nafaham sii aamiiiiiiiiiiiiiiin. wadan dedoow oo aan marti kunahay maa waxas oo kalae lagula dhaqmaaaa? yaab,com
ascwrwb all walaalaha
waxaan oran lahaa wax walba waa iimaanka iyo akhlaaqda ruuxa haduunsan iimaan lahayn waa macasalama xishood haduusan lahay ruuxa waxa uu rabo sameynaa taasi waa dhab , marka inta qaldan allaha hasoo hadeeyo aamiiiiiiiiiiiiiiiiin ,intii toosana alloow toosnaantooda u wanaaji aamiiiiiiiiiiiiiiin .